Jimco, Nov 6 , 2020-Itoobiya oo laga cabsi qabo in uu ka qarxo dagaal sokeeye – LaacibOnline
Jimco, Nov 6 , 2020-Itoobiya oo laga cabsi qabo in uu ka qarxo dagaal sokeeye
Xiisadan ayaa ka dhalatay kaddib markii Ra’iisal Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed uu amar ku bixiyay howlgal militari oo ka dhan ah gobolka Tigray-ga oo uu ku eedeeyay in ay ka socdaan dhaqdhaqaaqyo ka dhan ah militariga iyo dhaca hantida dowladda.
Sidoo kale Xukuumadda ayaa xaalad degdeg ah ku soo rogtay gobolka si loo ballaariyo howlgalkan ka dhanka ah Jabhada xisbiga TPLF.
Dhinaca kale Tigray laftirkooda ayaa wadda dhaqdhaqaaqyo lid ku ah go’aanka ka soo baxay Ra’iisal Wasaare Abiy Ahmed iyagaoo doonaya in ay iska difaacaan ugu yarraan ciidamada difaaca Qaranka Ra’iisal Wasaaruhu ku amray howlgalkan.
Arrintan ayaa abuureysa cabsi soo foodsaartay waddanka oo dhan oo laga cabsi qabo in uu ka qarxo dalka dagaal sokeeyo, iyadoo markii horeba xiriirka Tigray iyo Xukuumadda Dhexe uusan wanaagsaneyn.
Sidoo kale Xiisadda taagan waxay sare u qaaddeysaa cabsida laga qabo in xisbiga Tigray-ga ee TPLF uu tallaabo u qaadi karo sameynta maamul u gaar ah oo ka madax bannaan federaalka Itoobiya.
← Hyderabad woman harassed by husband in Somalia, family appeals to GOI for help
Ethiopia says forced into ‘aimless war’ as bombings alleged →
Isniin, Nov 23, 2020-Shirka midowga musharixiinta madaxweynaha oo maanta la soo gabagabey-nayo
Talaado, Oct 6 , 2020-Hay’addaha xuquuqul insaanka iyo ururada saxaafada caalamka oo madaxweyne Farmaajo u diray qoraal cabasho ah